Xasan sheekh oo ka hadlay Werarkii Muqdisho (Daawo) – Radio Daljir
Xasan sheekh oo ka hadlay Werarkii Muqdisho (Daawo)
Maarso 1, 2019 5:48 b 1
Madaxweynihiii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu ku cambaareynayo ka soo saaray qaraxyadii iyo weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku tilmaamay weerarkii xalay mid bahalnimo ah oo ay geysteen dad aan diin lahayn.
Halkan hoose ka aqriso Qoraalka Xasan Sheekh Maxamuud
Anigoo aad uga murugoonaya weerarkii ay argagaxisadu ku xasuuqeen dadka rayidka ah, ayagoo noloshooda caadiga ku jirana ku laayay wadada Makah Al Mukaramah ayaa waxaan shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeynayaa murugada xanuunka badan ee soo wajahday, saameynta adagna nagu dhalisay.
Inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto, ehelkoodiina samir iyo iimaan eebe haka siiyo, inta dhaawaca ahna caafimaad deg deg ah ayaan eebe uga baryayaa.
Waa nasiib darro aad u weyn in maalin weliba ay argagaxisada aan diin iyo damiir Soomaalinimo midna laheyn ay dadkeena wax galka ah micno darro ku xasuuqaan, waxaan ugu baaqayaa laamaha amaanka ee dowladda federaalka in ay xoojiyaan mas’uuliyadda ka saaran badbaadinta shacabka, shacabkana waxaan ugu baaqayaa in ay hay’adaha amniga kala shaqeeyaan sugida amaanka iyo in meel looga soo wada jeesto bahalada caadeystay xasuuqa dadkeena.
Al-shabaab oo wali ka dhex dagaalamaysa Hotel Maka Al-Mukarama
Wararkii ugu dambeyeey Qaraxyadii iyo werarkii Muqdisho
Qaraxyada maanta iyo kuwa biri diyaar baan unahay sababta hadalkii farmaajo oo ahaa qofkii qarax ku dhinta anigaa magayo saakane kama hadlin ilahow umadaada bad baadi mida kale mudane dalkaan adiga ayuu kusugayaa sidii horay aad utiri qabyo ninkeda aya dhamestiro anagane karabkaaga ayaan taganahy